Reporting – My Life Magazine
खान खाने यस्तो शैली, हामीले पनि सिक्ने कि…
ReportingJuly 17, 2018
जब भोक लाग्छ, थालभरी भात पस्कियो । दाल, तरकारी जे छ, त्यसैसँग मुछेर ग्वाम-ग्वाम खायो । कहाँ बसेर, कसरी, कति, कुनबेला खाने भन्ने हामीलाई त्यती मतलब हुँदैन । यसो हुनुमा दुई कारण छन् । एक…
नेपालमा बाटोको मापदण्ड कति हो ?
ReportingJanuary 3, 2018
राजमार्गको सीमाः २५ गजबाट कसरी पुग्यो ३१ मिटरसम्म ? बिर्तामोड l राजमार्गहरुको ‘सडक सीमा’ कति हो ? यसमा धेरै अन्योलमा छन्, कसैले २५ मिटर भन्छन् त कसैले ३१ । वास्तवमै राजमार्ग मात्रै होइन, सहायक राजमार्ग, जिल्लास्तरीय…